May 17, 2019 Osman Somalia, Wararka Maanta 16
Madaxweynaha Galmudug ee Xaaf ayaa caga jugleyn toos ah u diray madaxweynaha Somaliya ee Farmaajo ka dib hadalkiisa uu u jeediyay jaaliyadda Galmudug ee Nairobi
” Farmaajo ima yaqaan balse ma ihi qof lagu soo deg dego” ayuu yiri madaxweyne Xaaf oo hadalkiisa uu ka jeediyay kulankaas uu ahaa mid aad u ad-adag kana dhan ahaa Madaxweyne Farmaajo
” Nin aan ka talin qeyb yar oo Muqdisho ah ayaa doonaya in uu na maamulo” ayuu sii raaciyay mr Xaaf , hoos ka daawo ama riix link hoose
Muuqalkaas oo dhameystiran halkaan ka daawo
Daawasho wacan bari ciidamada dhulka bada cirka we jamhuriyada baraksysan ee sl.
Anigu caawa waad ii Casuman tahiin gaar ahaan kii atoore ee boqortoyada dhacday ee maxamuud saleban xayeysiiya.
Cimri tagay ceeb ku sagooti waa masiibo weyn runtii. Odaygu tubaakadiisii ayuu u foof tagay laakiin in uu dagaal-oogenimo ku darsado isaga oo uu gafuurku sidaaas u caddaaday ma ahayn wax laga filayay sanadkan aynu ku jiron oo ay bil ramadhaan na tahay.
Xaqiiqada meeshan ku duugan baa ah in qaddiyaddii uu reer u soo hadhay ee fashilantay wali dacaalka la sii haysto oo eeddeeda la doonayo in cid kale lagu laalo. Waxaa waheliya in khilaafka Galgaduud ragaadiyay uu salka ku hayo Habar Gidir oo is diiddan iyo in la damacsan yahay sabdursi xaaraan ah oo hab deegaanka beeleed ee gobolladan dhexe lid ku ah.
Marka Ahlu Sunna weerar lagu qaadayo miyaanay iyagu xaq buuxa u lahayn rabitaanka shacabkooda iyo ismaamulkooda hoose? Maxaa ta Galmudug na xalaal ka dhigay ta Ahlu Sunna xaaraantimeeyay? Dalka iyo federaalismka miyaan loo sinnayn toloow?
Bal caqli xumaadaa tubaakada daya!
Xaaf af qashuushle,waqi kuumaba harin oo waad duqowday,midday kale farmaajo dadka uu ka dhashay waad taqaanna maanta isma baranaysaan,Mooryaan yahow futada madoowe,adigaaba aan xukumin Galnus muduh,ee haku Soo laaban waddanka,Kenya iska joog Farmaajo cidda uu ka dhashay waxay kuugu wacaan Qaarmadoobe,ama F**ta madoowe.
Anagu reer cabudwaaq waanu tagernaa waayo waa magalada kaliya ee laga xuso sl.
Xataa waxa xaflada nagala soo qayb galay suldaanka guud ee cabudwaaq suldaan cabdicasiis suldaan beyle.
Waxan ka mabsuday siday kuwii 2000 dhashay u xusayan jamhuriyada baraksysan ee sl
Qudunquutay ku quuso
*XAAFOW adeerow, gerigòan baad dagaal Qabiil uga naadinaysaaye BAL XISAABI inta aqoonyahan ooy Somalia manta leedahay OO dhallinyaradooda u sheegi kara inay kicintaadu tahay mid aad ku danaysaneyso.=====?????. AHMED sammi WAANADAADI arkay balse adeer ma aamusikaro OO waxaan ku taaganahay dariiqi uu AUNTE Abawaan Qaasim u tilmaamay walaalki; “MUGDI BAAN KA GACAN HAATIYA MAXAMEDKEYGOOW SOMALI MIDAB DOORSANTAAN MEEDAY LEYAHAYE”. Adeer BEEN masheege intaan xusuustaan qoray ILMANA waan iska tirtiray MARKA adeer cudurkaan Somalinimo ma ogi goru igu dhacay MARKAAN is iraah goormaad qaadayna WAAN dhaafiwaayay ANIGOO ku indha baqsaday xilligi HA NOOLAATADI SYL oo ay ii wehliso inay ILAA 5fac iska-kay dhaleen Beelo kala gedisan MARKA iima bannaana meel aan isu badiyo-buurto. *Ahmed mahadsanid adeer, iskana gir dariiqaas waa qodxa badanyahe ADIGANA waxaa iiga kaa muuqata inaad LIQLIQANAYSE. WBT
Sidaas baan kaa doonayaa waad samirtay haddana samirka ha ka tagin.
Oday ahaan baad waday oo war jooga oo war ha dhicin oo sidaas ka daaya laakiin waxaad la hadleysay dad muuqaal dad waaweyn leh laakiin cagli iyo garasho ku yartahay. Haddana arrintaada kicinta iyo baraarujinta meesha ka sii wad ee “Qofkii soo joog laga waayo waxaa laga helaa soo jiifso’.
Waxaa calooshaada madow ku jiray baad ka hadashay waxaad tiri Habargidir baa leh Galmudug xageed ku tuurtay umadii kale ee deganayd weligeed Dawlada Fedraalka waa la mucaaradikaraa laakiin qabiil inaad weerarto wax wanaagsan ma aha
Dawlada federaalka qorshoul tag laakiin hub keen Horay bay u dhacday hub Maamulka Galmudug loo dhiibay oo Gaalkacyolagu weerararay
Dawlada Federaalka kala shaqay ciidan qaran sii loo helokuwasoo ka saaraya shayaadiinta aad hoosta ku haysataan
HUB MA HELEYSAAN CID IDINKU AAMINAYSA MA JIRTO
TIMIRTII HORE AYAA IDINKU MAQAN
Dabshidow, illeen waxaad tahay Nabiib Munaafaqa WAR goormaan KH/HA/NOOLAATO uga marag kacay INUU Xasan Sheekh dilay 60 xildhibaan?. *Haddana waan kugu celine Waan qabaa tuhun ah inuusan Xasan moogeyn ciddii qaarijisay xildhibaanki Carab Saalax HADDANA IIMA MUUQATO Xasano hub soo qaatay oo dad qaarijina BALSE laga yaabee INAY mooriyaan u adkaysa weysay dhaqanka xildhibaanka ay ayyagu ficilkaa fuliyeen si ay OMBRELLAHA Xasan u galaan. *****Dabshidow waxaad iga sugtaaba waa anoo dadka ku bara, Cinwaankuna wuxuu noqon; “Dabshid wuxuu yiri, Ahmed Somali wuu yiri; “Xasan Sheekh wuxuu dilay 60 xildhibaan”. *Adeer gardarro ma aqaan MANA u dulqaato RAALLI gelina ma diido ADIGUNA ilama muuqatid ruux RAALI-AHOW kara SABABTA oo ah taa waxay u baahantay Geesimo xiniinyo wadata. °§*Bal day saan irrid aad ka baxdo kugu raadshay. WBT
Wixii rag ku soo tacBay saw farmajo kuma bedelin yaa reerkayga ah iyo tolay ee ka kaca marna kibir inyar kadibna isku xaar
Waxaan DHALIIL adag u soo jeedina Abwaaniinta ay ugu horreeyaan Cabdi Qays iyo Xadraawi. *Saaxiibayaal ma waxaad raalli ka noqoteen in maanta hortiina Abwaaniinta dhalliyarada ee damaqa Somali leh la xiro ama loo goodiyo?. *Cabdi saaxib, aaway; XEEBTAA JABUUTE SOMALI LAGA XADAY?. °Day Faarax Murtiile waxaa lagu haystaa waa tabtaadiye SEE adoo Garowe jooga uga hadashay midnimo Somali. °§°Cabdi saaxiib, adiga iska daaye Hadraawiyaan 2bo sano ka weynahay welina waxaan ku jira halganki OO anoo fadhi ku dirira ayyey I dayriyeen; Dir, Daarood, Hawiye iyo Raxanweyn. *Hadduu Muuse idin xiro WAXAA igu ballana, Cir, Bad iyo Berriba midaydootaba ha noqote intii karaankayga (UL_TAAGSI) inaan Hargaysa iska xaadiriyo. °Muuse waa i yaqaan haddii la yiraah WAA duuliyihii kacaan diidka ahaa (ma ahayne amarada qaladka ayyaan diidi jiray). °HALGANKI MA DHAMMAAN. WBT
Daarood futa cade & hawiye futo madoobe u gar qaadi maayo anigu.
Daarood futa cade & Hawiye futo madoobe u kale hiilin maayo.
Daawada dhamaantiin dabaaldega xuska 18 may.
To Mubarak Yusuf
Hawiye futo madoobe waxa laga wada mataqaanaa? Hadaadan aqoonin anigaa kuu sheegi waxaa laga wadaa Hawiye gus weyne. Fadlan waxaada aqoon u laheeyn ha soo qaadin
Midde kale aad leedahay u kale hiilin maayo waa kuugu doqonimo sababtoo ah
Daarood nolol kuuma ogola
Hawiyana nolol kuuguma haysto
Haddana Hawiye hiilo kaagama baahno laakiin wax garosho la’aantaada dibedda ha keenin.
Samaaale… hawiye haduu GUS leeyahay Ugaandhaysku ma waseeen.
DAAWO:- Somaliland oo kahadashay sababta ay udiiday in ay ka qayb gasho doorasho 2021 “Kala quusanay”.
DAAWO:- Puntland oo si jeesjees ah uga jawaabtay hadalkii kasoo yeeray wasiir Goodax ee kusaabsaan imtixaanaadkii shalay.